EPS-KLT ကြေညာချက်.. | ရွှေမင်းသား
Home » ကိုရီးယား အလုပ်အကိုင် » EPS-KLT ကြေညာချက်..
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, September 13, 2008
Now, Myanmar migrant young people want to go overseas between countries of the most popular in Korea.
South Korean government-certified Korean Proficiency Test (EPS-KLT) will now take place from October 19 to be formally Announced.
This is not justatest. The test took excellent results in people in the Korean labor, visa can work.
Passing grade is 80 percent more than 3500 people have passed the top of the ticket to go to Korea to get it.
သတ်မှတ်အမှတ် ၈၀ နှင့် အထက် ရရှိသူများထဲမှ အယောက် ၃၅၀၀ ရွေးချယ်သွားမည်။
Successful applicants will be announced on November 3, 2008, (Monday)
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင် အောက်ပါ ဝဘ်ဆိုဒ် များမှ အောင်စာရင်း ကြေညာမည်။
SHWE INN WA SERVICES AGENCY(placement of workers in South Korea later this company is dealing with the monopoly) Website http://www.shweinnwamanpower.com/
The South Korean government-related or on the website.
Application is open from September 15 to September 19, the application SHWE INN WA SERVICES AGENCY-served basis.
၁၅-၉-၂၀၀၈ မှ ၁၉-၉-၂၀၀၈ အထိ ၅ ရက်ကြာ လျှောက်လွှာထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင် လျှောက်လွှာ တင်ရမည်ဖြစ်သည်။
* မျှော်မှန်းအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပေးရမည်။
*နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်ပြား မူရင်း နှင့် မိတ္တူ ၂ စောင် စာမေးပွဲ လျှောက်လွှာတွင် ကပ်ပေးရပါမည်။
* (၃ ဒသမ ၅ မမ*၄ ဒသမ ၅မမ) ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ
*အိမ်ထောင်စု စာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (တင်ထားပြီးသူများ မလိုပါ)
* ရပ်ကွက် အေးချမ်းဖြိုးကောင်စီမှ ထောက်ခံချက် မူရင်းတစ်စောင် (တင်ထားပြီးသူများ မလိုပါ)
*သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံချက်မူရင်း တစ်စောင်( တင်ထားပြီးသူများ မလိုပါ)
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခမှာ US$17 နှင့် ညီမျှသော မြန်မာငွေ
SHWE INN WA SERVICES AGENCY
8/KHA, PYAY ROAD 8 MILE, MAYANGONE TOWNSHIP, MYANMAR ,
ရွှေအင်းဝ ဝန်ဆောင်မှု အေဂျင်စီ ကုမ္ပဏီ လိမိတက်
အမှတ် ၈/ခ ၊၈ မိုင် ၊ပြည်လမ်း ၊မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်။
နောက်ခံရှု့ခင်းရယ်..အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ..information တွေရယ်..
i never forget your pretty blog !